Fanenjehana voafonja :: Depiote teo aloha voasambotra teny Analakely • AoRaha
Tra-tehaky ny zandary, teny Analakely, ihany Raveloson Ludovic na i Leva, depiote teo aloha voafidy tany Mahabo, omaly maraina tokony ho tamin’ny 11 ora latsaka fahefany, rehefa nanjavona nandritra ny fito volana. Nanomboka nokarohina, tamin’ny 7 febroary lasa teo, izy taorian’ny nivoahany ny fonja tany Toliara. Voaheloka higadra dimy taona antranomaizina sazy mihatra ity olom-boafidy teo aloha ity noho ny raharaha fanimbana ala niampangana azy, saingy tafavoaka ny fonja tamin’ny fomba tsy ara-dalàna.
« Efa fetsy ary tena nanao azy tsy ho tratra mandrakizay io depiote teo aloha io. Tsy vao izao izy no efa saika voasambotra, taorian’ny famoahana filazana fikarohana azy, tamin’ny 7 febroary teo. Indroa saika voasambotra teto an-drenivohitra izy saingy tafaporitsaka hatrany. Fanintelony ity teny Analakely ity. Efa narahinay maso, andro sy alina, ny lehilahy. Miovaova fiara hatrany izy rehefa mandeha. Miova isan’andro ihany koa na ny mpamiliny aza », hoy ireo mpitandro filaminana nisambotra azy.
Tao anatin’ny fitohanan’ ny fiara no noraisim-potsiny teny Analakely i Leva. « Noteneninay moramora izy mba hivoaka ny fiara nitondra azy sy hifindra ao anaty fiara izay nanarahanay azy avy ao aoriana. Nolavin’ny vadiny, izay solombavambahoaka ary nitondra fiara hafa tao aoriana ny fisamborana nataonay », araka ny tatitry ny zava-niseho nataon’ireo zandary. Niantso an’itsy olom-boafidy mba hanaraka azy ireo hatrany amin’ny birao kosa ireo mpitandro filaminana, dia any no manazava ny zava-misy.
Navantana teny amin’ny sampana misahana ny heloka bevava an’ny Zandarimaria, eny Fiadanana, itsy depiote teo aloha tany Mahabo itsy, taorian’izay. « Miandry ny toromarika avy amin’ny Fitsarana izahay satria raha ny tokony ho izy dia olona mamita sazy noho ny fanamelohan’ny Fitsarana azy ity voasambotra ity », hoy ny loharanom-baovao avy eny Fiadanana.